यो हो ‘अजिङगर’ मसाज सेन्टर ! गराउने हो ? (तस्विर) – Medianp
यो हो ‘अजिङगर’ मसाज सेन्टर ! गराउने हो ? (तस्विर)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष २६, २०७४११:३६
मालिस या मसाज, यो शव्द सुन्दै आनन्द महशुस हुन्छ । तर अजिङगरले मालिस गर्ने कुरा सम्झनुहोस् त ! शरिर फुलेर आउँछ । अजिङगर आफ्नो शिकारलाई विस्तारै विस्तारै पक्डन्छ । अनि निल्न थाल्छ । तर, केही देशमा अजिङगरलाई मालिस गराउन समेत प्रयोग गरिन्छ ।
अजिङगरले मालिस गराउनेवालाले डराउनु नपर्ने बताइन्छ । मसाज भन्दा ३० मिनेट अघि अजिङगरलाई खाना खुवाइन्छ । तीन मिटर लामो र आठ किलोग्राम तौलको अजिङगर मानिसको शरिरमा राखिन्छ ।
मालिस गराउनलेले जति नै हिम्मत राखेपनि मनको कुनामा भने डर अवश्य लाग्छ । यो मसाज सेन्टर इन्डोनेशियामा छ । मसाज गराउनेहरुले शशिरमा अजिङ्गर हिँड्दा बेग्लै आनन्द आउने बताएका छन् ।
मानिसको हातको तुलनामा अजिङ्गरको मसाज अलग हुन्छ । पुरै बेरिएको अजिङगरले शरिरलाई घरी कस्ने र घरी खुकुलो छोड्ने गर्छ । यस्तो मसाज मानिसको हातबाट सम्भव छैन । मसाज सकिएपछि मानिस आनन्दको स्वास फेर्छन् । मानिस यो पनि भन्छन्, की मसाजको समयमा आफ्नो डरलाई काबुमा राख्न सिकियो ।
ग्राहकको सुरक्षाका लागि मसाजको समयमा सुपरभाइजर राखिएको हुन्छ । उनीहरुले अजिङगरको मुभमेन्ट र उसको व्यवहारलाई निगरानी गर्छन् । इन्डोनेशियाका साथै अन्य केही देशमा पनि यस्तो मालिस सेन्टर खोलिएको छ । यस्ता मसाज सेन्टर ब्रिटेन र फिलिपिन्समा समेत छन् । एजेन्सी
यी चार राशी भएका व्यक्तिको लागि २०१९ को पहिलो महिना नै अशुभ
अचम्मको देश जहाँ एक किलो कुखुराको मासुको पर्छ लाखौं लाख
३१ वर्षिय युवकले गरे ९१ वािर्षय वृद्धासँग विवाह ! हनिमुन मनाउने क्रममा घट्यो डरलाग्दो घटना !
नेपालमा २०७२ सालको भन्दा शक्तिशालि भूकम्प जान सक्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी